'Boqonnaan dahumsaa dheerachuun carraa hojii dubartootaa miidha' - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree Itoophiyaa walgahii A.L.I Sadaasa 26, 2010 taasiseen labsii hojattoota mootummaa ragaasisuun boqonnaa dahumsaa dubartoota baatii sadi irraa gara afuriitti foyyeesseera.
Haadhooliin BBC'n dubbise tokko tokkos, tarkaanfichi gaariidha garuu walitti aansuun harma qofa baatii jahaaf hosiisuuf ammalleen boqonnichi foyyaa'u qabaata jedhu.
Gaxeezexeessituu kan turte Roozaa Masitiikaa hojii ishee kan dhaabdee wayita mucaashee jalqabaa deesse ture.
Fooyya'insaa hayyamichaatiif duula gaggeessaa kan turte yoo ta'u jijirama amma taasifameen baayyee gammaddu ishee dubbatti.
''Ji'a jaha yaa ta'u kan jedhamuufis haati akka boqattuu fi akkasumas mucaa ishee harma akka hoosiftuufiidha. Ta'us daballi ji'a tokkoo amma argamee kunu kan laayyoo miti. Akkuma haadholii baay'een raawwataa jiran, boqonnaa waggaa isaanii irraa dabalachuun ji'a jaha guttachu danda'u,'' jette jirti.
Pirezidaantiin Waldaa hakiimoota ulfaa fi gadameessaa Dr. Darajjee Nugusee dahumsa irraa boqachuufi harma hosiisuuf, boqannichi dheerachuu akka deegaran dubbatu.
Labsiichis namoota baay'ee kan gammachiise yoo ta'u, raggaasifamuu labsichaa hordofuun gaaffii haadhooliin damee dhuunfaa keessa hojatan hoo? jedhu akka ka'u taasiseera.
Biyya tokko keessa hojjachaa fi ashuraa walqixa kanfalaa attamiin garaa garummaan akkasii jiraachu danda'aa jechuun baay'een gaaffii kaasuu.
"Walitti dhufeenya hojjataafi mindeessaa dhaabbilee damee dhunfaa fi kanneen bajata mootummaatiin hin bulfamne ilaalchisuun labsiin biraa jiraachuusaafi innis fooyya'uun bu'aa walfakkaataa akka argatan ni taasifama," jedhu Daarektarri Seeraa Ministeera Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii Obbo Daraje Takiyibalu.
''Labsiin hojjataafi mindeessaa fooyya'urratti argama. Dhimmi akka bu'uraatti ilaalamuus dubartiin itti gaafatamummaa umamaa dhaloota bakka busuu bahaa akka jirtuudha. Kanaafuu ijjannoo walfakkaatu qabaatu jedhamee eegama. Kan hanga ammaatti turees wal fakkaataadha,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malee, adeemsi labsii boqonnaa dahumsaa fooyyeessu dubartoonni damee dhuunfaa irra hojjatanii jalqabbii irratti argama.
Akka Obbo Darajeetti, Ministeerri Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa dhimmicha ilaalaa jira.
Karaa gara biraatiin ammoo, labsichi waajjiraaleen motummaa bakka daa'imman keessa turan akka qopheessan labseera.
Faallaa kanaatiinis, boqonnichi dheerachuunsaa carraa dubartoonni qacaramuuf qaban xiqqeessu mala jechuun dubartoonni yaadda'an jiru.
Kanneen keessayis fuula feesbuukiifi marsariitiiwwan adda addaa irrattis waa'ee dubartootaa kan barreessitu Aaddee Beteliheem Nagaash, boqonnichi gara ji'a jahaatti akka dheeratuuf yaaluun dura haala qabatamaa diinagdee biyyattii xiyyeefannaa keessa galchuun barbaachisaa ta'a jetti.
''Jalqaba hawaasichi gahee isaanii hubachuun dhiibbaa haadhoolii irra jiru qooddachuuf fedhii agarsiisu qaba. Abbootiin qabeenyaas wayita hayyama boqonnaa kennan dhaloota itti aanu kunuunsaa akka jiran beeku qabaatu,'' jetti.
Jalqaba haala labsii hojjattoota motumaa 515/1999tti, boqonnaa dahumsaa baatii sadii ture.
Viidiyoo Dubartoota Paakistaan tajaajila fayyaa bu'uuraarraa fagoo jiraniif fala